Fikarohana momba ny firaisana Ny firafitry ny fanambadiana ao Edgar Cayce - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Tao amin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany aho raha Edgar Cayce, fantatra amin'ny hoe "Mpaminany sangy", dia nateraka indray. Ahtun Re dia nampahafantariko ahy fa efa niorina indray tamin'ny fomba ofisialy i Edgar tamin'ny faminaniany manokana momba ny fahaterahany indray. Noho izany, mbola tanora ihany i Edgar indray.
Nifandray tamin'ny dadatoako tamin'ny vatana vaovao indray i Edgar Cayce, izay nanam-pahefana ambony of the Fikambanan'ny fikarohana sy ny fahazavana (IZA), izay nitantara fa tsy gaga izy ny amin'ny mombamomba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao Edgar Cayce.
Na tsy ho fantatra na oviana na oviana ny fanamboarana indray ao amin'ny vatana vaovao any Edgar Cayce.
Tsy manohana tranga rehetra voavolavola momba ny famerenana amin'ny laoniny indray an'i Edgar Casey izay ampahibemaso amin'izao fotoana izao (2017) isika.
Tranga iray mifandraika amin'izany dia:
David Wilcock amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i Thomas Sugrue, mpanoratra ny "Misy renirano", ilay boky nampalaza an'i Edgar Cayce